प्रेम र सेक्स धेरै परका कुरा हुन् : सिर्जना निङ्लेखु - Naya Online
प्रेम र सेक्स धेरै परका कुरा हुन् : सिर्जना निङ्लेखु
सोमवार, असार २६, २०७४ (July 10th, 2017 at 1:35pm ) ग्लामर न्युज, ब्रेकिंग न्युज, मोडेल वाच
सिर्जना निङ्लेखु । मोडलिङ र स्टेज पर्फमेन्सहरुमा स्थापित बनेको नाम हो । आजकल उनी पूर्वमा हुने अधिकांश स्टेज पर्फमेन्सहरुमा छाउने गर्छिन् । अभियनमा राम्रो दखल भएको बताउने सिर्जना सञ्चारकर्मीका रूपमा पनि परिचित छिन् । खुलेर कुरा गर्न रुचाउने सिर्जना आजकल के गर्दैछिन् ? धेरैलाई चासोको विषय हुन सक्छ । नयाँ अनलाईन डटकमले उनै सिर्जनासँग गरेको ग्लामर गफ :
आजभोलि स्टेजमा, कन्सर्टहरुमा एमसी गरिरहेको बढी भेटिनुहुन्छ ? किन म्युजिक भिडियो र फिल्महरुमा काम नपाएर हो ?
खासमा म सञ्चारकर्मी बढी हुँ । त्यसैले बढी स्टेजहरुमा नै रमाउँछु । प्रोग्रमहरु होस्ट गरिरहेकै छु । म नायिका भन्दा पनि आफूलाई कलाकार भन्न रुचाउँछु । मलाई मेरो (लिम्बू) समुदायका धेरै जनाले उदाउँदै गरेको कलाकार नै भनेर चिन्नुहुन्छ । त्यसैले म फिल्म नपाएर अगाडि नआएको हो भन्दिनँ, किनकि म स्थापित भइसेको छैन । तर पनि फिल्महरु पाउँदा नगर्ने भन्ने त हुँदैन । एक दुई वटा फिल्मका स्क्रिप्ट पनि नआएका होइनन्, त्यस बारे सोच्दै छु । तर मलाई खास गरी मेरै कल्चरमा आधारित कथाहरुमा मात्रै समेट्नुहुन्छ । आर्ट मुभीहरुमा काम गर्ने रहर छ ।
स्टेज प्रोग्रममा आफू निक्कै अब्बल छु भन्न खोज्नुभएको ?
त्यस्तो पनि होइन । तर, दमक र आसपासका धेरै प्रोग्रामहरुमा मैले होस्ट गरिरहेको हुन्छु । दर्शकहरुले धेरै रुचाएर पनि होला । समग्रमा यो कामबाट सन्तुष्ट नै छु ।
सञ्चारकर्मीका रूपमा अघि आएको मान्छे, अहिले बढी स्टेजमा र कलाकारितामा जम्दै गएर त्यो पाटो छाडेको हो त ?
म सञ्चार क्षेत्रबाट पलायन भएको छैन । तर, म आफूलाई पत्रकार नै हुँ भन्न चाहन्न । पत्रकारिता र मिडिया पर्सन उस्तै लागे पनि कामको हिसाबले फरक छ । एमसी गरिरहेको छु, अनलाईन टिभीतिर पनि आबद्ध छु । त्यसैले म सञ्चारकर्मी नै हुँ अहिले पनि भन्छु । स्टेजमा होस्ट गर्ने मेरो सानैदेखिको प्यासन नै हो । दुःख गरेर यो क्षेत्रमा आइपुगेको छु । अहिले यसैमा प्रोफेसनल भएको छु ।
लिम्बू संस्कृतिसँग नजिक रहेर कलाकारिता गरिरहनुभएको छ, के लाग्छ ? लिम्बू म्युजिक भिडियो भन्दा माथि जान सकिँदैन ?
मेरो क्षमता लिम्बू कल्चरमा आधारित म्युजिक भिडियोसम्म मात्रै हो भन्ने लाग्दैन । एक्टिङ सिकेको छु । रेडियोमा नाटक गर्नेदेखि एक्टिङ रियालिटी शोमा टप फाइभसम्म पनि पुगेकी हुँ । त्यसैले जुनसुकै भूमिकामा काम गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स छ । तर, कल्चरमा म आफू लिम्बू भएको र मेरो स्टार्टिङ पनि त्यहीँबाट भएकाले मलाई धेरै दर्शकहरुले यसैमा देख्न रुचाएका छन् । तर सिर्जना आम रूपमा कुनै पनि भूमिकामा काम गर्न सक्छ भन्ने देखाउन म प्रयास गरिरहेको छु । म लिम्बू र त्यसपछि नेपाली हुँ । आफ्नो पर्फमेन्सलाई बढाउँदै अघि बढ्ने छु ।
करिअर बनाउने होडमा हुनुहुन्छ, तपाईका फ्यानहरुले कतिको दुःख दिन्छन् ? कस्तो लाग्छ ?
म स्टाब्लिज भइसकेको एक्ट्रेस होइन, त्यसो भएकाले त्यस्तो धेरै फ्यानहरु हुने कुरा भएन । तर, धेरैले स्टेजहरुमा देख्ने, म्युजिक भिडियोहरुमा देख्ने गर्नुभएको छ । मेसेन्जरमा निक्कै जनाले सोधिरहनु भएको हुन्छ । फोन नम्बर कसैबाट लिएर फोन गर्नेहरु पनि छन् । तर, म सबै जनालाई मेरो कामबाटै रेस्पोन्स गरिरहेकी छु जस्तो लाग्छ । दर्शक स्रोताहरुकै माया र साथले सफल भइने हो । त्यसैले उहाँहरुलाई इग्नोर गर्ने मेरो बानी छैन । तर, म अफेयरमा ध्यानै दिन्नँ । म र मेरो कामलाई कसैले मन पराउनुलाई चाहिँ नराम्रो मान्दिनँ । नढाँटी भन्छु, केटा भन्दा केटीहरु नै बढी फ्यान पाएकी छु ।
सञ्चार र कलाकारिता क्षेत्रमा नआएको भए सिर्जना यतिबेला के गरिरहेको हुन्थ्यो होला ?
नो अप्सन । किनभने मेरो सानैदेखिको रहर हो । नाच्ने गाउने हुँदै म १४÷१५ वर्षको हुँदादेखि म मिडिया र एक्टिङकै क्षेत्रमा छु । अब जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म सानो तिने जस्तै होस्, मिडिया र कला क्षेत्रमै विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको हुनेछु जस्तो लाग्छ । अहिले पनि धेरै प्रोग्रामहरुमै बिजी छु । किनभने मेरो अरु कुनै पर्मानेन्ट जब पनि छैन । मिलेसम्म यो वर्षभित्र कम्तिमा दुईटासम्म सिनेमामा काम गर्छुहोला । आफ्नै कुनै निजी बिजिनेश पनि थाल्ने योजना छ ।
अरुलाई प्रश्न गर्न निक्कै माहिर देखिने सिर्जना, आफैलाई अरुले प्रश्न गर्दा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
मलाई वास्तवमा प्रश्न गर्न र अरुका कुरा जान्न निक्कै रमाइलो लाग्छ । जहाँ जाँदा पनि म धेरै मानिसहरुलाई प्रश्न गरिहेकै हुन्छु । स्वाभाविक हो, मलाई अरुले प्रश्न गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नै । तर, यसरी आफूले अरुको प्रश्न फेस गर्न र जवाफ दिन पाउँदा निक्कै रमाइलो लागिरहेको छ ।
तपाईलाई म्युजिक भिडियोमार्फत धेरैले देशविदेशबाट चिनेका छन्, र सोधिरहेका पनि हुन्छन् । नयाँ म्युजिक भिडियोहरुको अवस्था के छ ?
खासगरी मलाई कल्चरल कामबाट धेरैले देश विदेशमा चिन्नुभएको छ । माया गर्नुभएको छ । निक्कै अगाडि काम गरेको म्युजिक भिडियोहरु आइरहेका छन् । पछिल्लो समय करिब ४ महिना यता चाहिँ कुनै म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी छैन । तर, पहिले नै काम गरिसकेका भिडियोहरु अहिले बजारमा आउँदा दर्शक र स्रोताहरुलाई त्यस्तो लामो ग्याप भएको महसुस भएको छैन जस्तो लाग्छ । केही थप भिडियोहरु बजारमा आउन पनि लागेका छन् । कतिपयले अब दमकमै सीमित हुने हो भनेर पनि सोध्ने गर्नुभएको छ, तर त्यस्तो होइन । काम हुँदा काठमाडौं जाने हो, अरु बेला दमकमै हुन्छु । तर, दमकको सिर्जना भनेर सबैलाई चिनाउने रहर छ । सायद अब भिडियोमा चाहिँ अलिक कम गर्छु होला । फिल्मतिरै बढी मेहनत गरेर काम गर्ने सोचिरहेको छु ।
भनेपछि यति राम्री कलाकारलाई प्रेम प्रस्तावको त ओइरो नै लाग्दो हो ?
स्वाभाविक रूपमा धेरैबाट यस्तो कुरा सुनेकी छु । साथीहरुले भन्छन् । तर, प्रेम आफैमा नेगेटिभ थट होइन भन्ने लाग्छ । म मेरो घरपरिवार, साथीभाइ, आफन्त, मेरो सबै शुभचिन्तकहरु सबैलाई माया गर्छु । सबैभन्दा धेरै म मेरो कामलाई माया गर्छु । जहाँसम्म शारीरिक सम्बन्धको कुरालाई प्रेमसँग जोडिएको हो भने त्यसमा म रिजिड छु । प्रेम फिलिङ्सको कुरो हो । म प्रेमलाई फिल गर्छु, इन्जोए गर्छु ।
प्रेम र सेक्समा के अन्तर छ त्यसो भए ?
मेरो बिचारमा प्रेम मनभित्रैबाट उत्पन्न हुने फिलिङ्स हो । यो फिलिङ्समा सेक्स नहुन पनि सक्छ । सेक्स विपरित लिङ्गीप्रतिको आकर्षण हो । त्यसैले प्रेम र सेक्स धेरै परका कुरा हुन् ।
अन्तिममा नयाँ अनलाईन डटकममार्फत आफ्ना दर्शक स्रोताहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
सबैको माया, सपोर्ट र होसला पाएकी छु । यो क्षेत्रमा लागेर सबैले चिन्नुभएको छ । यसरी नै सधैँ सपोर्ट गरिदिनुहोस् । तपाईहरुको मायाले अरु राम्रो काम गर्ने प्रेरणा मिलोस् । नयाँ अनलाई डटकम लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
फोटो : सुसन राई